Ziziphi izigidi zabantu abazenzayo?
Ingaba unesibini sezigidigidi zeedola, uyavuma ukuba uzichithe kwi-trinket, eya kuqokelela uthuli? Ngaba uthanda ukuthenga iimpahla eziphathekayo ezingenakufikeleleka kubantu abaninzi, ngaloo ndlela zibonisa ukuphakama kwazo? Ziziphi izigidigidi ezizibethelela zona, yintoni imidlalo yokunethezeka ekulungele ukutshabalalisa ukhilimu woluntu lwethu?
1. Umagazini kwigolide ngeadayimani
Imicu egolide esetyenziselwa ukuhlinzwa ngoplastiki, kunye neadayimani kwiikholeji zezinja zizo zonke iintlobo ezifaniswa nokukhululwa kwephepha ledayimane negolide. Kwaveliswa ngenxa yentsebenziswano phakathi kweenkampani ezimbini - i-ITP Lifestyle yokupapasha indlu kunye nezindlu zegolide. Kwiiyure ezingama-86, iingcweti zenziwe ngaphezulu kwama-gramu angama-91 egolide kunye ne-diamonds engama-622 ukudala iphephancwadi labesifazane elibizwa ngeKoehl. Njengoko ubona, i-gloss ayisaphili kakuhle, umntu wayengenomdla wokuyifunda, kodwa ukufunda idilesi kwisiqulatho sedayim, mhlawumbi kungenakulibaleka.
2. Itikiti kwisikhephe esingekho
Ukuba i-millionaire ithanda ukuqokelela izinto ezinqabileyo, akayi kuba yindoda eyaneleyo yokuthenga ithikithi kwinqanawa engakhoyo ngoku. Ngoko ke, ngokulingana ne-66,000 zamaRandi, umqokeleli waseMerika uthenge ithikithi yeTitanic, eyayigcinwe ngumdala ubudala, uLilan Gertrud Asplund oneminyaka engu-99 ubudala, owasinda kwintlekele eyingozi kwinqanawa. Njengentombazana, eneminyaka emihlanu ubudala, wangena kwiTitanic kunye nosapho lwakhe-abazalwana abane nabazali. Abazalwana abathathu kunye noyise babengenako ukuphunyuka kwi-liner bomelele ekugqibeleni kunye ne-iceberg. Nangona kunjalo, kubuhlungu ukuba ibali liba njalo, inyaniso ihlala ithe ithikithi ukuya kwisikhephe esingekhoyo sele isithengisiwe, kwaye kungekhona enye yeedola eziliwaka ezilishumi.
3. Idayimane e-egg
Kwiyona ntengiso enkulu kunazo zonke u-Christie we-6.2 yezigidigidi zedola wathengiswa idayimani engenambala ubukhulu beqanda lesinqanawa. Sasiqhuba idayimani 101,27 carats, kwaye senza idayimani esilinganisa ii-460 carats, ezitholakala kumzantsi Afrika. Kuba imbali yokuba khona kwele ndandiso yintengiso yesithathu, apho ilitye likhulu ngaphezu kweenqwelo eziyi-100. Ngokuqinisekileyo, kwakukho umgidi-mali owayefuna ukuthenga ezininzi, kodwa wacela ukuba igama lakhe lingabi ngurhulumente.
4. Iimpumba ezibiza kakhulu kwihlabathi
Amawaka angamawaka amabini ama-dollar kwiibhotile zeqhumiso? Kulula, ngakumbi xa kuziwa kwinombolo yomgubo 1 Inkosi yobukhosi. INcwadi yeGuinness yamaRekhodi ayikwazanga ukuphosa eso siganeko kwaye siyibhala phantsi kwamaphepha athi "yiphunga elimnandi kakhulu kwihlabathi." Ubunqwenelekayo bala mimoya bule nto yokuba, okokuqala, zenziwe izithako ezingavumelekanga, okwesibini, ibhotile ihlotshiswe ngedayimhlophe emhlophe, kwaye, okwesithathu, ukusasazwa kweziqhumiso iibhotile ezili-10. Umdali wale mpepho ngumqambi uClave Christian, phantsi kwegama kuphela iibhotile zamabhinqa eziyi-1000 kuphela eziveliswayo kunye nenani elifanayo leebhotile zesiphunga somntu. Ukuba awukwazi ukufumana iziqhumiso zama-dollar angamawaka angama-200, fumana ingqungquthela yentando yesininzi yeli qhumiso kwi-dollar ezingama-2350, ibhotile eyenziwa ngaphandle kwedayimane.
5. Iisanda kwiimilenze zedayimani
Uluphi umehluko phakathi kwezicathulo ezivela kwisitolo esicathulo seesicathulo kunye ne-Tokyo yobuciko bobugcisa be-designers Stuart Weizmann kunye no-Oscar Hyman? Ngokukodwa ngo-690 ierbibi. Kwaye kulungele le 1.5 million yezigidi. Ngokutsho kwabakhi befashini, amantombazana aphefumlelwe izicathulo ezibomvu zintombazana uDorothy evela ku-Oz, naye uvela kwindalo ethi "IWebdi yeSithili sase-Emerald". Mhlawumbi akuyiyo yonke into eyenziwa nguDorothy no-Ellie into enje into: kokubili intengo ye-th-th, kwaye isithende sele seyi-12 centimitha!
Yintoni enye igidigidi zeedola zabantu abazizityebi ezishiye? Ingubo yomtshato edayimani ngezigidi ezili-12 zeedola kwiRenee Strausse, iklabhu yeGolma ye-Honma ephuma kwigolide kunye neplatinum i-$ 52,938, isikhwama seengwenya esinesibhakabhaka esivela ku-Fendi nge $ 25,700, isiqithi sabucala kwi $ 23 yezigidi nangaphezulu.
Indlela yokubeka imali kwi-skype?
Imidlalo yonyaka omtsha kubantwana
Kujikeleze iminqamlezo: yiyiphi iholide egujwa ngoSeptemba 27?
Imidlalo yokuzalwa yasekhaya
Ndingawubhiyozela phi unyaka omtsha?
Indlela yokwenza isifiso kuMnyaka omtsha 2015 ukuze kuzaliseke?
Imvula okanye iqhwa: yintoni eya kuwa 2015
Yintoni i powder powder
UVictoria Bonya wahlangana no-Alex Smurfit, ifoto
Ikhocktail ngewayini ekhanyayo
Ukukhanya ngaphezu kwelanga: ezintlanu ezikhazimlayo zokugqoka umnyaka omtsha
Ziziphi iivithamini eyenzileyo umzimba?
U-Pugacheva wayekwesaba uKostyushkina, kodwa wadansa phantsi kwe "Leningrad"
I-Recipe ye-saladi ehlobo elula ye-squid evela kumculi uNatalie
AmaHedgehogs kunye nomnquba kunye nelayisi
Ukutya Okuncedo Ukutya okunempilo
I-Pea isobho nge-sausages zokuzingela
I-home yakhika ebusika - iibhola zokupheka ezihamba phambili ngeefoto ezithatha ngeyanyathelo
Iibhisikidi ze-tshokoleta kunye nama-cherries
Siqala ukuphuhlisa isicwangciso sezoshishino nezomsebenzi
Iingcebiso ezifanelekileyo kubafana kunye namantombazana